भ्रमण ट्रम्पको चर्चा छोरी इवांकाको ! हेर्नु होस् फोटो | Pennepal
Home अन्तराष्ट्रिय भ्रमण ट्रम्पको चर्चा छोरी इवांकाको ! हेर्नु होस् फोटो
भ्रमण ट्रम्पको चर्चा छोरी इवांकाको ! हेर्नु होस् फोटो
अमेरिकी राष्ट्रपतिको भारत भ्रमणको मंगलबार दोश्रो दिन हो । उनको यो भ्रमणको सुरुवात गुजरात प्रान्तको अहमदावादबाट भएको थियो । यहाँ उनले संसारकै ठूलो स्टेडियममा करिव एक लाख भातीयलाई संवोधन गरे । यो सम्वोधनमा उनले क्षेत्रिय शान्ति, आतंकवाद र व्यापारव्यवसायको कुरा गरे ।
यो भ्रमणका क्रममा ट्रम्पवाहेक सबैभन्दा बढी मानिसको आकर्षणको केन्द्र बनिन् र जो सबैभन्दा बढी चर्चित भइन् उनको नाम हो इवांका ट्रम्प । यसको कारण भनेको उनको व्यक्तित्व त छदैछ यसवाहेक यो भ्रमणमा उनको अहम् भूमिका छ ।
इवांका र उनका पति जेयर्ड कुशनर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको बरिष्ठ सल्लाहमा सम्मिलित छन् । यी दुवैको ह्वाइटभित्रै कार्यालय पनि छ । इवांकाको विदेश नीति भनौ वा उनको सल्लाह यी दुवै ट्रम्पका अत्यन्त विश्वास पात्र मानिन्नछन् । इवांका र कुशनरको सुझावपछिनै ट्रम्पले इजरायल र प्यालेष्टिनीबीच विाादको घर रहेको यरुसेलमलाई इजरायलको हिस्सा भएको घोषणा गरेका थिए ।
यी दुईको भूमिका उत्तर र दक्षिण कोरियाबीचको विवाद घटाउन पनि महत्वपूर्ण रहेको मानिन्छ । उत्तर कोयाली नेता किम जो« उनसंग अहिलेसम्म भएको तीनवटै वार्तामा इवांका ट्रम्पको साथमै थिइन् ।
इवांकाको यो दोश्रो भारत भ्रमण हो । यसअघि उनी हैदरावादमा आयोजित इन्टरप्रिनयोर समिटमा पनि भाग लिन भारत आएकी थिइन् । उनको त्यो भ्रमण अतिनै छोटो थियो । त्यो भ्रमणमा उनकापनि कुशनर थिएनन् । इवांका र कुशनर राष्ट्रपति निर्वाचनका क्रममा पनि महत्वपूर्ण थियो । ट्रम्प परिवारसहित विदेश भ्रमणमा निश्केको यो पहिलो पटक हो ।
२०१६ मा भएको अमेरिकी राष्ट्रपति निर्वाचनमा भएको प्रचार–प्रसारमा कुशनरले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल सञ्चारको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए भने इवांकाले कयौं र्यालीलाई संवोधन गरेकी थिइन् । यी दुवै मिलेर राष्ट्रपतिमा ट्रम्पको जितको आधार तयार पारेका थिए ।
इवांका र ट्रम्पको आपसी भावानुवोध पनि धेरै राम्रो छ । यसकारण ट्रम्प उनको सल्लाहलाई धेरैनै महत्व दिन्छन् । यो भारत भ्रमणमा पनि उनको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको छ ।
ट्रम्पको यो भ्रमणमा इवांका अध्याधिक चर्चामा छिन् । भारतीय सञ्चार माध्यममा उनको हसाई, उनको चालढाल र यहाँसम्मकी उनको ड्रेसअपको वारेमा पनि धेरै किसिमका समाचर छापिएका छन् ।
हलिउडका एक निर्मातालाई २५ वर्ष जेल, यस्तो छ आरोप